Sheekooyinku waxay ku arooraan, ama qeyb ka yihiin mid ka mid ah faraca BAHAHA asalka ah ee Suugaanta, sida la og-yahayna SUUGAANTU waxay u kala bax-daa labo BAHOOD oo asal, kalana ah ERAY iyo OR, Suugaanta erayga ahi waxay leedahay farac ka kooban labo, oo kala ah TIX iyo TIRAAB.
Faraca ka baxa BAHAHA asalka ah ee SUUGAANTA, isla markaas-na ah kan aynu u dan leenahay waa TIRAAB-TA, taasoo seeraar u ah SHEEKOOYINKA, dadka raac-raaca SUUGAANTA Soomaaliduna waxay yiraahdaan Sheekooyinku waa kuwa ugu saameyn-ta badan TIRAAB-TA, waxay-na Sheekooyinku in yar ka horeeyaan MAAH-MAAHYADA, maadaama ay sidaas tahay, waxaynu oran karnaa sheekooyinku waa SUUGAAN magoogasho leh, lana fal-gasha dareenka ruuxiga ah ee akh-ristaha/dhegeys-taha, sidoo kalena Sheekooyinku waxay isu tabiyaan si min-guuris ah.
- Riwaayaduhu waxay qeyb ka yihiin maansada oo ka mida unugyada ka jeexma qeyb-ta kale ee SUUGAANTA ee ah OR-ta, taasoo ah EREYGII oo lagu lifaaqey LAXAN ama RHYTHM, Soomaalidii horena waxaa kaalinkaas ( Dabaqaada Laxanka ) u buuxin jirey JAAN iyo JIIB.
- Riwaayadaha waxaa loo adeegsadaa qaab masrixiyeed, halka SHEEKOOYINKA loo adeegsado qaab qoraal ama tebin ah.
- ISKA HADAL, qaabkani waa mid sheekada uu qoruhu noqonayo tiir-dhexaadkeeda, isaga ayaana iska hadlaya, Tusaalle:- Waxaan ku sii jeeday goobteyda shaqada, markii la isoo gaarsiiiyey khabarka naxdinta leh, ee xambaarsanaa geerida Aabahey, qoraagu wuxuu sawir ka bixinayaa siday wax u dhaceen, isaga ayaana ah tabiyaha sheekada, marka waxaan dhihi karnaa qaabkani waa kan ugu wanaagsan xagga fahamka akh-ristaha, sidoo kalena waa mid aad ugu fudud qoraaga qudhiisa.
- QOF KA HADAL, kani waa ka duwan yahay qeyb-tii hore, qoraaga ayaana laga doonayaa inuu soo tebiyo sheekada, isaga oo aan ka mid aheyn inta SHEEKADU khuseyso, Tusaalle:- Axmed wuxuu ku sii jeeday goobtiisa shaqada, markii la soo gaarsiiyey khabarka uusan mahdin ee xambaarsanaa geerida Aabihiis.
La soco qeyb-ta 1-aad.